Hamiratra amin’izay Iarivo | NewsMada
Hamiratra amin’izay Iarivo
Asa avy hatrany. Na tsy mbola ofisialy aza ny vokatra, efa mazava ny ho mpitantana an’Antananarivo manomboka eto. Avy hatrany dia asa fa tsy kabary. Ain’ny fampandrosoana ny tanàna. Porofoina amin’ny vahoaka an’Antananarivo fa asa no nametrahana azy amin’izany toerana izany.
Tsy diso safidy ny mponin’Antananarivo fa manantena ny hamirapiratan’ity renivohitr’i Madagasikara ity amin’izay manomboka eto. Betsaka ny asa miandry ary efa voarafitra tanatin’ny Veliranon’Iarivo avokoa izany ka tsy hisy ho latsaka na iray aza.
Io ihany koa no hanadinan’ny mponina ny mpitantana ka hitsarana azy.
Anisan’ny asa maika ny fanalana ny fako izay tena mivangongo sy miparitaka amin’izao fotoana. Ankoatra izany ny fanalana ireo mpivarotra mibahana ny arabe sy manakorontana ny fifamoivoizana.
Nanjaka indrindra ny gaboraraky ny mpivarotra amoron-dalana hatramin’izay ka manantena ny fialan’ireo ny mponin’Antananarivo fa anisan’ny manakorontana ny tanàna sy mapirongatra ny tsy fandriampahalemana an-tanàn-dehibe.
Sady mpandraharaha matanjaka no ampy traikefa ny mpitantana vaovao ny tanàna. Tsara fifandraisana indrindra amin’ny filoham-pirenena ihany koa no sady mahay miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka.
Midika izany rehetra izany fa ho mora ny mitady vola enti-mampandroso ity Renivohitra ity. Tsara toerana amin’ny maha ben’ny Tanàna mihitsy satria azo antoka fa hahavita hampandroso haingana ary azo ianteherana.
Miandrandra fampandrosoana haingna kanefa maharitra, araka izany, ny vahoakan’Antananarivo. Tafiditra ao anatin’izany koa ny fametrahana rafitra handrindrana ny fandriampahalemana izay mampalaza ratsy ity Antananarivo ity hatrany ivelany mihitsy.
Ho lohany amin’ny tanàn-dehibe amin’izay anie Antananarivo ka ho reharehan’i Madagasikara fa tsy ho henatra intsony, toy ny amin’izao fotoana.